Hira ho an'ny olona rehetra ao Aubagne - Ny Diabe Eran-tany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Mihira ho an'ny rehetra ao Aubagne
Natsangan'ny EnVies EnJeux, ny 28 febroary tao Augbagne, Distrikan'i Marseille, France: HANOKY AN-TRAN'ANDRIAMANITRA sy IZAY REHETRA
Ity hetsika ity dia nokarakarain'ny fikambanana EnVies EnJeux. Chloé Di Cintio dia milaza amintsika ny antony nanosika azy hikarakara an'io hetsika io:
"Ekenay ny tenantsika ao anatin'ny tanjon'ny volana martsa hampifandray ny olona sy ny hetsika izay mitondra kolontsaina fandriampahalemana sy ny faniriana ny hampivoatra azy. Ny EnVies EnJeux dia miaraka amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa sy tsy mahery setra miaraka amin'ny tanjona fampandrosoana ny tsirairay. Raha ny haino aman-jery ara-tantara dia ilaina, misokatra amin'ny sehatra mahasoa sy mifanandrify amin'ity dingana ity. Vokatr'izany, Envies EnJeux dia mankafy ny hira ho an'ny tolo-kevitra rehetra, ary ny fahaizan'i Marie Prost, hanohanana sy hanomezana azy ireo amin'ny fomba mifandraika ho an'ny dinamika ao anaty vondrona ary hanolokolo ny fahatokisan-tenan'ny olona tsirairay. ny tenany sy ny tsirairay. »
Olona am-polony avy amin'ny fiaviana samihafa, maro amin'izy ireo tsy fantatra, no namaly ny fanasana.
Nanomboka tamin'ny fanolorana ny volana martsa faha-2 sy ny fahalianany ny alina: hanomezana fahitana, hanangona (saika na ara-batana) ary hanasa hetsika miaraka ataon'ireo izay mitsipaka herisetra amin'ny endriny rehetra ary mifidy ny tsy herisetra ho valin-teny mifandrindra amin'ny fanambin'ny ankehitriny. ny maha-olombelona.
Marie, izay mandray anjara ao amin'ny Envies Enjeux ary nandritra ny fotoana ela tao amin'ny fikambanana World tsy misy ady ary tsy nisy Herisetra, dia nametraka ny rohy mampiavaka ny hatsaran'ny hira (miala voly sy ny fahaizan'ny angovo, ny fanehoana ary ny fizarana ny fihetseham-po, sns). , endrika endrika manokana an'ny Canto para Todos y Todos (feo sy orinasa, tsy azo atao, malalaka, misokatra ho an'ny rehetra) ary ny kolontsainan'ny tsy herisetra.
Narahin'ny kilalao fanamafisam-peo maromaro sy fanarenana notarihana nifantoka tamin'ny fifandraisana, ny famelana, ny fahatsapana na ny fahafinaretana amin'ny mozika. Ho fehiny, nanokana hira tsy mendrika ho an'ny olona voan'ny herisetra izahay.
Taorian'ity fomba mahafinaritra ity hahalala sy hifanerasera, dia manohy ny fomba nentim-paharazana bebe kokoa isika ary miaraka amin'ny fahafinaretana mitovy, mifanakalo hevitra amin'ny sakafo miaraka.
Anisan'ireo mpandray anjara, mpaka sary iray, Lucas Bois, dia naka sary tsara tarehy ary naka sary naka sary, niaraka tamin'ny hevitra natolony hanolotra an'io montage tamin'ny World March io.
Misaotra betsaka azy amin'ny azy.
Ny fijoroana ho vavolombelona sasany momba ny mpandray anjara:
"Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahafahako nanomboka nandefa indray aho tsy nahatsiaro tena ho tsy fahatokisana. Efa ela! Misaotra betsaka anao ary manantena ny hamerina ny fitsangatsanganana. »
“Tsara ny mihira, mangovitra, mihomehy, mandihy, mihetsika, mihaona amin'ny olona vaovao amin'ny toe-tsaina milamina, tsy mitsara ary mifampizara. Vonona ny hamerimberina izany traikefa izany aho. »
"Ny fotoana tsara toa izao. Arahin'ireo fihaonana mahafinaritra. Ny zoma dia nahita "mihira ho an'ny rehetra" aho. Tiako ny mihira, fa tsy fantatro ny zavatra andrasana ... Ny hira ho an'ny rehetra dia mihoatra lavitra noho ny fahafinaretana mihira. Nahita antokona olona be fitiavana aho, teknika milalao, izay mitondra varotra sy fisarahana ara-tsaina. Fotoana tsy nampoizina, mahafinaritra sy nampihetsi-po, ivelan'ny fiainana andavanandro, izay nahafahako nandositra ny ahiahako ankehitriny ary nifandray tamin'ny hafa. Manantena aho fa hamerina ireo fonosana mizara tsara tarehy toy izany! »
Diabe faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana: https://theworldmarch.org/